Ahoana ny nanovan’ny manampahefana ao amin’ny seranam-piaramanidin’i Bangladesh ny fihetsiky ny vahoaka tamin’ny alalan’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2018 12:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, Español, русский, বাংলা
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hazrat Shahjalal ao Dhaka, Bangladesh. sary avy amin'i Nahod Sultan via Wikimedia Commons.
Raha efa nandalo tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hazrat Shahjalal tao Dhaka, Bangladesh, ianao taona vitsivitsy lasa izay dia mety ho nahamarika fa be dia be ny zavatra niova. Efa tsy heno intsony izany fiandrasana tsy mety tapitra noho ny fahaverezan'entana izany fa raisin'ny mpanjifa any an-tranony ny harony sy ny valiziny, ary nihena be dia be ny entan'ny mpandeha misy mangalatra. Nitranga izany noho ny ezaka fanavaozana nataon'ny mpitsara mpampihatra lalàna ao amin'ny Lapa Fitsaran'ny Seranam-piaramanidin'i Dhaka antsoina hoe Muhammad Yusuf, izay miara-miasa amin'ireo hafa ao amin'ny departemanta misy azy nampiasa ny YouTube sy ny Facebook hampihenana ny fandikan-dalàna sy hanampiana ny mpandeha ao amin'ity seranam-piaramanidin'i Bangladesh lehibe indrindra ity.
Tamin'ny taona 2014, tsizarizary loatra ny fampitaovana sy ny fandraisana olona tao amin'ny Seranam-Piaramanidina Hazrat Shahjalal ary ratsy tantana ihany koa ka nametraka ny laharany ho iray amin'ireo seranam-piaramanidina ratsy indrindra ao Azia. Saingy noho ny ezaka niarahana tamin'ny departemanta hafa, nanapa-kevitra ny hihoatra ny fanamby hitondra fiovana ny Lapan'ny Fitsarana ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Dhaka sy ireo mpitsara mampihatra lalàna miisa roa ao aminy, izay tsy iza fa i Muhammad Yusuf sy i Sharif Muhammed Forhad Hossain.
Namoaka pejy Facebook, tamin'ny desambra 2014, manana anarana hoe Magistrates, All Airports of Bangladesh izay manasongadina ireo fanampiana ny hafa amin'ny fanangonana ny fitarainan'ny mpandeha na izay rehetra nandalo tao amin'ny seranam-piaramanidina ireo mpitsara. Hentitra dia hentitra tamin'ireo zotram-piaramanidina mandray famandrihana mihoatra noho ny isan'ny toerana sy mandao ireo mpandeha mihoatra na dia efa nameno ny fanamarinam-pisoratana sy nandalo fisavana pasipaoro ireo mpitsara ireo. Nanatontosa fitsarana mitety seranana ihany koa ry zareo hanasaziana ireo mpiasan'ny seranam-piaramanidina tompon'andraikitra amin'ny fanohintohinana mpandeha, fanesorana entana (lazaina ho mihoatra tsy azo entina?), fangalarana avy amin'ny entan'ny mpandeha na fitakiana vola tsy ara-dalàna amin'ny mpandeha. Araka ny tatitra, nihena be dia be tokoa ny fanohintohinana mpandeha, ny tsi-fanarahan-dalàna ary ny heloka bevava tany amin'ny seranam-piaramanidina ny taona vitsivitsy nanaraka izany.
Rehefa nafindra toerana i Sharif Muhammed Forhad Hossain, dia i Muhammad Yusuf indray no nandray ny fitantanana. Nampidiriny ny fisantaran'andraikitra toy ny “Give The Waste, Take The Money” [Atolory ny fako, raiso ny vola] izay nampanjary ho kely indrindra ny fako avelan'ny mpandeha. Natsangan'i Yusuf ihany koa ny famakiam-boky ao amin'ny seranam-piaramanidina, amin'ny fanasaziana ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina manao fahadisoana amin'ny famakiana boky sy mitsapa ny fahaizan-dry zareo amin'izay novakiany avy eo. Azavaina amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsary YouTube Ny fisantaran'andraikitra antsoina hoe “Project TukiTaki (tetikasa zavatra kely)” :
Araka ny nolazain'i Yusuf, nampihena ny tahan'ny heloka bevava izany:
Miteraka tsindry hafa ho an'ny mpiasa maro ny famakiana boky. Rehefa mahita boky maromaro eny an-tanany ny mpiara-miasa aminy dia fantatr'izy ireo fa nisy fahadisoana (tsy fahaiza-mitondra tena na nangata-bola) nataony. Fantatry ny fianakaviany izy fa voasazy noho ny fahadisoana nataony.
Fanampiana mpandeha isaky ny lahatsary iray
Ny tetikasan'i Yusuf farany indrindra dia mikendry ny hampahafantarana ny mpandeha sy ny sarambambem-bahoaka amin'ireo fitsipika sy fepetra isan-karazany, ary ireo fikafika tsara amin'ny alalan'ny fantsona YouTube. Iray amin'ny vondron'olona tratran'ny fanohintohinana indrindra any amin'ny seranam-piaramanidina ireo mpiasa mpifindramonina avy any Bangladesh. Matetika no tsy fantatry ry zareo ireo fitsipika fa afa-mitondra entana tsy mandoa hetra ry zareo, ampianarina azy ireo ny fanaovana fitarainana sy ny maka ny entana very (na ny volan'ny fiantohana), ohatrinona ny vola vahiny azo entina, iza no mila mitondra karatra fanomezana alalana hiasa rehefa hivoaka, inona no atao raha tara sidina sns.
Ao anatin'ireo lahatsary fohy maro ao amin'ny fantsona Youtube, zarainy amin'ny teny bengali ny fampahafantarana maro — ampidiriny ao anatin'izany ireo tranga mpisy sy ny famaliana ireo fanontaniana hita ao amin'ny Magistrates, All Airports of Bangladesh sy ao amin'ny pejin'ny momba azy.
Ao amin'ity lahatsary manaraka ity, azavain'i Yusuf ny tsirinkevitra fototra amin'ny fahatongavana ara-potoana eo amin'ny fitodiana iray, ny zavatra atao rehefa tara sidina sns :
Ao amin'ny lahatsary manaraka, nohazavainy ny fahasamihafana eo amin'ny tapakila azo avaozina sy ny tapakila tsy azo avaozina intsony, ny zotra kilasy voalohany sy ny zotra mora sara, ary ny fahatarana sidina sy ny tsy fahatongavana :
Araka ny tatitra fivezivezena iraisampirenena nivoaka taona 2017 navoakan'ny Firenena Mikambana, mihoatra ny 7 tapitrisa ny mpiasa mpifindra monina avy ao Bangladesh miasa ivelan'ny fireneny mankany amin'ny saika kaontinanta rehetra eto amin'izao tontolo izao. Mandefa vola any amin'ny fianakaviany any an-tanindrazany izay manome vahana ny toekarenan'i Bangladesh ry zareo. Misy ireo sasantsasany mandeha any ivelany tsy nisoratra anarana sy taratasy fahazoana alalana avy amin'ny Birao misahana ny Mpiasa, Asa ary ny Fizàran'asa (BMET) ka avy eo tsy mahazo ny fanohanan'ny governemanta rehefa manana olana any amin'ny firenen-kafa. Raha vao tsy misy io fahazoana alalana io dia tsy avelan'ny mpiantsoroka ny fifindramonina hivoaka ny tany ireny olona ireny. Ho fampahafantarana ireo fitsipika sy ny tombontsoa azo amin'ny BMET no namoahany lahatsary roa. Indro ny ohatra iray amin'izany :
Volana vitsivitsy iay no nanombohan'i Yusuf ny fantsona YouTube-ny ary, hatramin'izao fotoana anoratana izao, efa mihoatra ny 30 ny isan'ny lahatsary navoakany. Tian'ny mpanaraka tokoa ireo lahatsary ireo izay nahazo tombontsoa tokoa avy amin'izao torohay amin'ny tenin'ny ao an-toerana izao ary hita ho niainga tokoa ilay fisantaran'andraikitra — Efa nahazo mpanjoky miisa 57k (58 368) ny fantsona.